Published May 25, 2021 at 5:39 AM CDT
Nebraska waxay kuxirantahay heerka shaqo la'aanta ugu yar wadanka, oo ay weheliso South Dakota iyo dhowr gobol oo kale.
South Dakota waxay qorsheyneysaa inay joojiso dheefaha federaalka 26-ka, iyo Iowa 13-ka Juun.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa ayaa soo warisay inaysan jirin dhimasho cusub sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19. Waxaa jiray oo kaliya 55 kiis oo cusub gobolka oo dhan, midna wuxuu ka dhacay Degmada Woodbury. Xilligan, ma jiraan bukaanno laga daaweynayo keliya jirrada ka jirta magaalada Sioux City.
Dhanka kale, saraakiisha Caafimaadka Degmada Siouxland ayaa sheegaya in ka badan 40 boqolkiiba dadka u qalma inay ku qaataan tallaalka Gobolka Woodbury si buuxda looga tallaalay COVID-19. Ku dhowaad 60% waxay leeyihiin hal qiyaas.
Magaalada Sioux City waxay isu diyaarineysaa xagaaga.
Maanta, Waaxda Xadiiqadaha iyo Goobaha Dalxiisku waxay soo saareen jadwalkooda biyaha.
Xarunta Biyaha ee loo yaqaan 'Riverside Aquatic Center' waxay u furan tahay saddexda maalmood ee Maalinta Xusuusta Toddobaadka iyo ka dib xilliga xilliga Juun 5 illaa Ogosto 15th.
Barkadaha Lief Erikson iyo Lewis ayaa shaqeyn doona laga bilaabo Juun 12 ilaa 8 Ogosto.
Shanta xarig ee magaalada ayaa u furan dadweynaha Sabtida iyada oo loo marayo Isbuuca Maalinta Shaqaalaha.
Guul muhiim u ah Maktabada Dadweynaha ee Magaalada Sioux oo leh furitaankii ugu dambeeyay tan iyo bilowgii Faafida.
Laanta Perry Creek ee u dhow Hamilton Boulevard ayaa loo furay adeegga socodka maanta. Saacadaha goobta waa 10:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo
Adeeggii qaadista ee Curbside-ka ayaa dhammaaday.
NEWS 5.24.21: NE Drops Federal C-19 Benefits, Senate Race Update, Pool Schedule, & Library Return
Nebraska Governor Pete Ricketts announced during his last news COVID-19 news conference he signed an executive order suspending all previous executive…